Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Baydhaba caawa - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Baydhaba caawa
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Baydhaba caawa
Baydhabo (Caasimada Online) – Magaalada Bayadhabo ee Xarunta ku meel gaarka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa caawa waxaa ka taagan xaalad cabsi xoogan ah, oo laga qabo in iska hor imaad uu ka dhaco gudaha magaaladaasi.
Ciidamo taabacsan Mukhtaar Rooboow ayaa waxa ay heystaan oo ay dhufeys kaga jiraan qeyb kamid ah magaalada Baydhabo iyadoo sidaas si lamid ah Booliska gaarka ahee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay gacanta ku hayaan qeybta Madaxtooyada iyo Airoboorka Baydhabo, sida uu inoo xaqiijiyay wakiil wareedka Risaala ee Baydhabo.
Waxaa gebi ahaanba xiran wadooyinka muhiimka ah ee Magaalada Baydhabo kadib markii banaanbaxayaal ka careysan xiritaanka wadaadka ay isugu soo baxeyn bartamaha magaalada ayna dhagxaan dhigeen badi wadooyinka.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalkii maanta ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen 10 ruux, 12 kalana ay dhaawacyo soo gaareen.
Khasaaraha nafeed ayaa yimid kaddib marki ay isku dhaceen ilaalada Mukhtaar Rooboow iyo taageerayaashiisa oo dhinac ah iyo ciidamada Itoobiyaanka ah ee ilaaliya xarunta madaxtooyada Baydhabo.
Magaalada Baydhabo waxaa aad u buux dhaafiyey ciidamo la sheegay in Roobow ay taageersan yihiin, waxayna taasi keentay in ciidamada Itoobiya ay banaanka usoo saaraan Taangiyo, welibana bartamaha magaalada ay difaacyo ka xirtaan.
Shacabka ayaa bilaabay iney aadaan meel walbo oo ay kaga gamban karaan rasaasta, mana jirto waan waan socota.